China L-valine CAS 72-18-4 Maka ndị na-emepụta nri na ndị na - eweta ya (AJI USP) | Ekele
L-Valine (Abbreviated Val) bụ otu n’ime amino acid iri na asatọ, yana otu n’ime amino acid asatọ dị mkpa n’ahụ mmadụ. A na-akpọ ya amino acids (BCAA) nwere njikọta na L-Leucine na L-Isoleucine ọnụ n'ihi na ha niile nwere ngwongwo methyl n'akụkụ ngwongwo ha.
L-Valine bụ otu n'ime mkpụrụ amino acid aliphatic n'etiti iri abụọ amino acid proteinogenic na amino acid nwere njikọ (BCAA) na anụmanụ n'onwe ya enweghị ike ịkọpụta ya ma na-eri nri iji gboo mkpa ha; ya mere L-valine bụ amino acid dị mkpa. Mmetụta ndị bụ isi dị ka ndị a:
(1) Agbakwunyere na nri lactations na-abawanye mkpụrụ mmiri ara ehi. Usoro a bụ na L-Valine nwere ike imetụta ọgbọ nke alanine na ntọhapụ nke akwara, na ọhụụ ọhụrụ alanine nwetara na lactations 'plasma nke ziri ezi na-enyere anụ ahụ aka ka ọ gbanwee maka mkpa maka akụrụngwa nke glucose ma si otú a na-arịgo mmiri ara ehi.
(2) Imeziwanye ikike mgbochi nke anụmanụ. L-Valine nwere ike ịkpali ọkpụkpụ anụmanụ T mkpụrụ ndụ ka ọ ghọọ sel T tozuru etozu. Thekọ nke valine na-ebelata ihe oriri C3 na ọkwa mbufe, na-egbochi uto nke thymus na mkpụrụ ndụ lymphoid dị n'akụkụ ma na-eme ka mgbochi uto na mkpụrụ ndụ ọbara ọcha na acid na-anọpụ iche. Ozugbo enweghị valine, ụmụ ọkụkọ ga-eme nwayọ nwayọ na-egbochi mmegide mgbochi ọrịa nje Newcastle.
(3) Mmetụta metụtara anụ ọhịa endocrine anụmanụ. Nnyocha e mere egosiwo na ịgha mkpụrụ nke lactating na nri ụmụ irighiri nri nke gbakwunyere L-valine nwere ike ịbawanye ụba nke prolactin na hormone na-eto eto na plasmas ha.
(4) L-valine dịkwa mkpa maka ebumnuche nke nrụzi anụ na mweghachi. A na-akpọ ya amino acid nwere njikọ ma ọ bụ BCAA, nke na-arụ ọrụ yana BCAA abụọ ọzọ a maara dịka L-Leucine na L-Isoleucine.
﹢26.6 ° ~﹢28.8 Celsius
Nke gara aga: L-Tryptophan CAS 73-22-3 maka ọkwa Pharma (USP)
Osote: L-Leucine CAS 61-90-5 Maka Nri Nri (AJI USP)
L-Threonine CAS 72-19-5 maka Nri Nri (FCC / AJI / ...
L-Isoleucine CAS 73-32-5 Maka Nri Nri (AJI USP ...
L-Lysine HCL CAS 657-27-2 maka Nri Nri (FCC / AJ ...
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm ọkwa, Nri oriri na-edozi ahụ, 73-32-5 L-Isoleucine, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, L-Threonine Nri Nri,